Ny karamanay aza tsy hiakatra mihitsy
2008-01-10 @ 09:45 in Toekarena
Nanana ny lazany teto amin'ny tanàna indray ity resaka nampakarana ny karama ity. Ny an'ny mpiasam-panjakana no nolazaina voalohany tamin'ity raharaha ity nandritra ny kabarin'ny filoha Ravalomanana tamin'ny faran'ny taona teo iny.10% no nolazaina ary natao hoe nahakivy ny mpiasam-panjakana izany. Izaho indray tsy hitako izay tokony hahakivy satria samy manao ny ataony daholo ihany ary raha misy ny sampan-draharaha tsy mandeha amin'izay laoniny ny fanaovana asa dia ny asam-panjakana no malaza voalohany indrindra amin'izany. Ny an-dry zareo aza misy fampakarana ihany isan-taona fa ny anay izany indray mandeha ihany izay tao anatin'ny dimy taona, sady noho ny "fiakaran-daharana" fa tsy hoe niakatra tamin'ny toerana nisy ahy.
Androany indray dia nahita tamin'ny gazety fa nanao soso-kevitra hampakarana ny karama koa ny patirao "sasany". Averiko indray ny hoe sasany ka tsy 10% toy ny an'ny mpiasam-panjakana fa 8% hoe. Endrey, mba misy vondrona manao izany ihany kay? Ny anay manko dia efa nilaza mialoha (aza manontany izay misy ahy fa tsy hilaza koa aho) fa na dia te-hanondrotra aza dia tsy afaka noho ny nampakaran'ny fanjakana ny isan-jaton'ny hetra alaina amin'ny orinasa. Tsy hilaza ny taha ihany koa aho satria ho hita any amin'ny teti-bolam-panjakana 2008. Indrisy ry mpiasan'ny tsy miankina toa anay fa tsy hisy ny fanondrotana...
Fa ny mba mahagaga ahy dia ny hevitra sasany manao hoe aleo, hono, tsy ampakarina ny karama, dia sakanan'ny fanjakana ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana. Atao ahoana fa izay angaha ny tarazon'ny fotokevitra sosialista revolisionera niainana fahazaza. Ny vidin'entana tsy ho azo ferana na oviana na oviana tsy hiakatra indrindra ao anatin'izao vanim-potoanan'ny fanotoloana izao. Zaranareo izay mahazo fanondrotana aza fa na dia miakatra aza ny vidim-piainana dia manana hafainganam-pandeha tsaratsara kokoa ianareo noho ny anay omaly tsy miova.
Fa izany eo ihany fa iza ary ireny manam-pahaizana momba ny antontanisa milaza fa 15% ireny ny fiakaran'ny vidin-jiro? Ny ahy ve rangahy lasa avo roa heny mihitsy ny fiakarany dia 15% hono... any amin'ny vaniny faharoa anie no tena mamely ilay fisondrotana e! (2° tranche no tiako lazaina fa ilazao ihany aho raha misy teny malagasy metimety aminy kokoa. Fa na dia hiakatra 8% aza ny karaman'ny mpiasa tsy miankina hafa ny anay aloha efa niala tsiny ny lehibe e!